Ubudlelwane: Ukwehlisa isifiso socansi | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Relationships Ukwehlisa isifiso sobulili
Ukunciphisa isifiso sobulili kuyinkinga yangempela ebuhlotsheni besikhathi eside. Kuza njengomphumela wokukhiqiza i-dopamine encane ngesikhathi sokuhlangana kocansi nomlingani ofanayo. Ngasikhathi sinye ubuchopho bunciphisa inani lalo lama-dopamine receptors ngokuhamba kwesikhathi ukucubungula umphumela womvuzo obangelwa yilowo muntu. I-Dopamine iyi-neurochemical eqhuba isifiso nogqozi. Iyachuma ebutsheni. Ngemuva kokuthi 'amakhemikhali amakhemikhali e-honeymoon' esephelile, singazizwa sinesifiso sobulili esincane noma singenaso nhlobo isifiso somlingani wethu. Singagxila ekwakheni umsebenzi wokuziphilisa noma ekukhuliseni izingane esikhundleni salokho. Akusho ukuthi asizizwa sithandana noma siboshelwe koshade naye, ukuthi nje isifiso sobulili sincane kunalezo zinsuku zokuqala, eziyinhloko zothando.
Leyo nzwa yokuzikhukhumeza ingadlulisela abantu abathile ukuba bafune amathuba amasha wokubambisana nabalingani abazithandayo, okubonakalayo noma kwangempela. Namuhla ukukhwabanisa kwezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kubangela ukuhlukunyezwa ebuhlotsheni abaningi. I-Coolidge Effect yisona isizathu sokuthi izithombe zobulili ezingcolile, kodwa izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ikakhulukazi, zikhangisa kakhulu. Ukusakazwa okuqhubekayo kwamanoveli namano abonakala sengathi bazimisele ukuvela kuyatholakala kithi, ngokuswayipha, chofoza noma uthephe. Ngaphandle kwe-Coolidge Effect, bekungeke kube ne-porn ye-intanethi. Ubuchopho bomlenze bokuqala abukwazi ukutshela umehluko phakathi kwabalingani bangempela kanye nezinguqulo ze-2-dimensional, zangempela zangempela esibukweni.
Ukuze usize ukuvuselela inhlansi, ukushintshanisa ukuziphatha okubambisana kunconywa kakhulu. Lezi zibonakaliso ezingenasisindo kumqondo womlenze osiza ukuqinisa umuzwa wokuhlukanisa noma ukufutheka. Bona lokhu kuyasiza esihlokweni ukuze uthole imininingwane eyengeziwe. Enye yezincwadi ezinhle kunawo wonke emakethe ukuthi akugcini nje kuphela ukubeka isifo se-neuroscience ne-psychology esenza lesi siqephu senzeke kodwa futhi sinesiqondiso sinyathelo ngesinyathelo sokuyiphulukisa, Umcibisholo onobuthi we-Cupid- Kusukela ku-Habit to Harmony in Relationships Sexual, ngo-Marnia Robinson. Okungatholakala lapha. Bheka futhi lokhu podcast ngokubuka okusheshayo kwendaba nomlobi.
<< Umphumela we-Coolidge Ezocansi Nezocansi >>